ဖအေချစ်သမီးလေးတွေရှိကြလား…. – Trend.com.mm
Posted on October 13, 2018 October 12, 2018 by Shun Lei Phyo
အမေဆိုတော့သားကိုပိုချစ်တတ်ကြပြီး ဖေဖေကြီးတွေကတော့သမီးလေးတွေဆို သဲသဲလှုပ်ပိုချစ်တတ်ကြတာသဘာဝပါပဲ။ ဆိုတော့ Daddy’s Girlလေးတွေရဲ့အားသာချက်တွေကဘာတွေဖြစ်မလဲ…Daddy’s Girl လေးဖြစ်ရခြင်းရဲ့အံ့သြဖွယ်ရာထူးခြားချက်တွေကဘာလဲဆိုတာ…
အဖေနဲ့ရင်းရင်းနှီးနှီးနေတတ်ကြတဲ့ မိန်းကလေးတွေဟာ တစ်စုံတစ်ခုကို စမ်းသပ်လုပ်ဆောင်ခံနီးမှာကြောက်တာမျိုး စိုးရိမ်တာမျိုးသိပ်မရှိတတ်ကြပါဘူး။ဖခင်ဆိုတာ မိခင်လို အရာရာမှာ စိုးရိမ်စိတ်နဲ့ ပိတ်ပင်ခဲပါတယ်။ သိကျွမ်းလာအောင်နားလည်လာအောင် ကိုယ့်ဘာသာစွမ်းဆောင်နိုင်အောင် လွှတ်ပေးတတ်ကြပြီး နောက်ကနေ ထိန်းထိန်းပေးတတ်ကြတာကြောင့် Daddy’Girlတွေ ဟာ ဘာလုပ်လုပ် စိုးရိမ်ကြောက်လန့်စိတ်များနေတာမျိုးမဖြစ်တတ်ကြပါဘူး။
ဖခင်နဲ့ရင်းရင်းနှီးနှီးနေတဲ့မိန်းကလေးတွေဟာ နူးညံ့သိမ်မွေ့တာမျိုးကြီးတော့ တအားမရှိပင်မဲ့ ယဉ်ကျေးပြီး ပွင့်လင်းတတ်ကြပါတယ်။ခေတ်နဲ့လိုက်လျောညီထွေအောင်နေထိုင်တတ်ကြပြီး ဖခင်နဲ့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောဆိုတိုင်ပင်တတ်ပြီး ဘာကို မှ ဖုံးကွယ်မထားတတ်ပဲ ရိုးရိုးသားသားပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောဆိုတတ်ပါတယ်။
ဘာလိုတောင်ရုပ်ဆိုးတယ်လို့သူများတွေဆိုနေကြပါစေအုံးတော့ ဖေဖေ့စိတ်ထဲမှာ ရော ပါးစပ်ဖျားမှာပါ ကိုယ့်ကို မင်းသမီးလေးနတ်သမီးလေးလို့တစ်ဖွဖွ ပြောနေသံတွေကိုကြားရတာကြောင့် သူများအတွက် ဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေ ကိုယ့် အဖေအတွက်တော့ကိုယ်ဟာ အရမ်းတော်ပြီးလှတဲ့ကောင်မလေးဖြစ်ပြီးသားပါ။ ဒါကြောင့်ဘာကိုပဲလုပ်လုပ် ဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့စမတ်ကျကျ နေတတ်ကြပါတယ်။
ဖခင်ဆိုတဲ့သူဟာ အိမ်ထောင်ကြီးတစ်ခုလုံးကို ဦးဆောင်နေတဲ့ဦးစီးဦးဆောင်ဆိုလည်းမမှားပါဘူး။ Daddy ‘s Girl လေးတွေဟာအဖေတွေဆီက မေတ္တာတွေပဲမဟုတ်ပဲ အသိပညာတွေကိုပါရကြတဲ့သူတွေပါ။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်တတ်ရမဲ့ပညာတွေထဲမပါလည်း ကောင်းတာမှန်သမျှတတ်သင့်တာမှန် သမျှကို တစ်ခါတလေ အမေတွေသိရင်ဆူမှာဆိုးလို့လက်ကြိတ်ထိုးသင်ပေးခဲ့တာလည်း ဒီဖေဖေတွေပါပဲ။
5. လူမှုနယ်ပယ်မှာ ၀င်ဆန့်အောင်နေတတ်တယ်
ဖခင်နဲ့အနီးကပ်နေခဲ့ရပြီး ဖခင်ဆီကမေတ္တာတွေ အသိပညာတွေရရှိခဲ့တဲ့ မိန်းကလေးတွေဟာ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာ ပိုပြီးဆက်ဆံပြောဆိုတတ်ကြပါတယ်။ ဘယ်သူ့ကိုဆို ဘယ်လို ပေါင်းရမယ်။ ဘယ်သူကတော့ဘယ်လိုပြောမှကြိုက်တတ်တယ် စသည်ဖြင့် ညဏ်လေးနဲ့လွှာပြီး လိမ္မာပါးနပ်စွာ ဆက်ဆံတတ်ကြပါတယ်။